कर्पोरेट नेपाल , १६ चैत्र २०७६, आईतवार, ०७:२७ pm
काठमाडौँ । तपाई विदेशबाट फर्कनुभएको छ वा कोरोना सङ्क्रमित मुलुकबाट भर्खरै आउनुभएको छ ? तपाईलाई कोरोनासँग मिल्दो जुल्दो कुनै लक्षण देखिएको छ ? यदि छ भने तपाई क्वारेन्टाइनमा बसीहाल्नुस् । तपाईले लापरवाही गरिरहनुभएको छ भने अब तपाईलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्न सक्नेछ । लुकीछिपी आफू पनि जोखिममा पर्नुभएको छ, घर परिवार, समाज र राष्ट्रकै विरुद्ध लागि रहनुभएको छ भन्ने निष्कर्षका साथ प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी जेल सजायसमेत गर्नसक्नेछ ।
बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले भने “क्वारेन्टाइनमा बसेका केही व्यक्ति भागेको वा नबसेको भन्ने पाइएकाले सङ्क्रमण रोग ऐनअनुसार कारवाही गर्ने निर्णय भएको छ ।” लापरवाही बढेको पाइएकाले कैद सजायदेखि अन्य कडा कारवाही हुने सचिव रेग्मीको भनाइ छ । केही जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्ति भागेको, लापरवाही गरेको पाइएकाले जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको भन्दै समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
समितिले विदेशमा रहेका विद्यार्थी जुन देशमा छन्, त्यही देशमा नै सुरक्षित रहन सरकारले अनुरोध गरेको छ । “हालको विषम् अवस्थामा विद्यार्थी जुन स्थानमा छन्, त्यहीँ सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ”, सचिव बिडारीले भने, “विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने खर्च नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत अभिभावकले पाठाउन सक्नेछन् ।” विद्यार्थी जहाँ जहाँ रहेका छन्, त्यहीँ रहन भनिएको छ । अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै ती विद्यार्थीलाई नेपाल फर्कने सक्ने गरी निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।
केही नेपाली नागरिक अझै पनि प्रवेश पाउने प्रतिक्षामा दशगजा क्षेत्रमा अलपत्र रहेका छन् । ती नेपाली नागरिकलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नजिकको क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रबन्ध गर्नसमेत समितिले आग्रह गरेको छ । सचिव बिडारीले भने “परिचयपत्रका आधारमा पहिचान गरेर नजिकको क्वारेन्टाइनमा रहने गरेर ती नागरिकको लगत लिएर नेपाल प्रवेश गर्न दिइनेछ ।” दशगजामा राख्न उपयुक्त नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा नेपाल आउन दिइनेछ ।
आज बिहान मात्रै चीनबाट आयात भएका कोरोना परीक्षण गर्ने मेशिन विभिन्न चार प्रदेशलाई प्रदान गरिने भएको छ । समितिको बैठकले आवश्यकताका आधारमा प्रदेश नं २, प्रदेश ५, कर्णालीको सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिममा एक÷एक थान पीसीआर मेशिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सचिव बिडारीले जानकारी दिए ।
बाँकी रहेको एक थान मेशिन भने काठमाडौँमा नै राखिने भएको छ । आवश्यकताको आधारमा सो मेशिन उपलब्ध गराइनेछ । धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना परीक्षण शुरु भइसकेकाले तत्काल उपलब्ध गराइएको छैन । यस्तै एक एक हजार थान पीपीआईसहित, अन्य उपकरण र औषधि उपलब्ध गराइनेछ । रासस
‘लकडाउन’का बेला कन्टेनरमा लुकेर यात्रा गर्ने ५२ जना नियन्त्रणमा